‘काँग्रेस र एमाले जस्तै गर्ने हो भने अर्को पार्टी किन चाहियो ?’ | Ratopati
वाइसीएलको भेलामा प्रचण्डको सम्बोधन
‘काँग्रेस र एमाले जस्तै गर्ने हो भने अर्को पार्टी किन चाहियो ?’
हामी तमसुक हेरेर बसियो, ओलीले प्रधानमन्त्री पड्काए : प्रचण्ड
personपुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ exploreकाठमाडौं access_timeभदौ १२, २०७८ chat_bubble_outline0
कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा राखेर एकता गर्दा राम्रो हुन्छ कि भनेर मैले आफैँ प्रस्ताव गरेको थिएँ । तर, दुर्भाग्य, त्यो पाँच वर्ष पनि टिक्न सकेन । काँग्रेसले चुनाव जितेर पनि पाँच वर्षसम्म टिक्न नसकेको तीतो यथार्थ हामीले पञ्चायतविरोधी आन्दोलनपछि भोगेका थियौँ । समाजवादी आन्दोलनका क्रममा कम्युनिस्टभित्र भएको त्यो ध्रुवीकरण पनि पाँच वर्ष टिकेन । बरु, भयानक प्रतिगमनका नाइकेहरू नै कम्युनिस्टभित्रै देखा परे, हामीले देशव्यापी अभियान चलाउनुप–यो ।
हाम्रो आशा, युवाहरूमाथि छ । यो भेला हेर्दै गर्दा तपाईँहरूमा उत्साह छ वा छैन । तपाईँहरू समर्पित भावनामा हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न । मैले हेर्दा माओवादी मात्रै होइन, हामी अहिले त गठबन्धन छौँ । धेरै दुःखले यो गठबन्धन बनेको हो । संविधानको रक्षाको निम्ति यसको (गठबन्धनको) रक्षा गर्नु छ । परिवर्तनको रक्षाका निम्ति यो गठबन्धनलाई रक्षा पनि गर्नु छ र सुदृढ पनि गर्नु छ ।
माधवले र मैले लड्डु खान नपाई ड्याम्म टाउकोमा घन हानियो : प्रचण्ड
पाँच दलीय गठबन्धन जोगाइराख्नु पर्छ : प्रचण्ड
प्रतिगमनका नाइकेका कारण पार्टी एकता टिकेन : प्रचण्ड
हामी अब शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको बाटोबाटै समाजवाद निर्माणको प्रक्रियामा छौँ । हामीले शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको बाटोमा जानका लागि उत्पादनको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । हाम्रो सपना ः हामीले हिजो पनि उत्पादन बिग्रेड, अब बन्दुक बोकेर हिँड्ने ब्रिगेड होइन भनेर भन्यौँ । तर, व्यवहारमा जसरी जानुपर्ने थियो, जान सकेन ।
तर, यतापट्टि (शान्ति प्रक्रियामा) आएपछि विचारमा पनि कहीँ न कहीँ स्खलित नै भएकै छ । विचारमा पनि समर्पित भएर, राष्ट्रको निम्ति समर्पित भएर जनताको निम्ति समर्पित भएर काम गर्नुभन्दा पदको र व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति काम गर्ने खतरा छ । हिजो अप्ठ्यारो कामको जिम्मा लिने, मोर्चामा मलाई अघि बढाइयोस् भनेर झगडा हामी, आज पदमा मलाई पठाइयोस् भनेर झगडा गर्नेमा रुपान्तरित हुँदै जाने खतरा भएकै छ ।
किनभने, त्यसका निम्ति काँग्रेस पनि छ, एमाले केपी ओलीको पार्टी पनि छ, उस्तै काम हामीले पनि गरिराख्ने हो भने अलग्गै पार्टी किन हुनुप–यो ? त्यही गएर बसे भइगो नि ?
तर, यहाँ खासगरी एमालेको केपी प्रवृत्ति भन्ने एउटा र गर्ने ठिक उल्टो रहेछ । म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्ने ! कति मिठो ! तर, केका लागि भन्नुहुँदो रहेछ भनेको त, भ्रष्टाचारलाई छोप्नका लागि लेबल रहेछ त्यो त । रक्सी अर्कै छ, लेबल त्यो राख्ने रहेछ, उहाँको बानी त ।
कतिपय साथीहरूलाई प्रचण्डले (एमालेसँग) एकता गर्नु नै गलत भयो भन्ने पनि लाग्छ । मलाई त्यो लागेको छैन । एकता गर्नै पर्ने थियो । एकता गर्दा विचार र राजनीति नमिलाई ग–यो भन्ने पनि कतिलाई लागेको छ । तपाईले दस्तावेज हेर्नुभयो भने ओली र मैले नै सही गरेका छौँ । माओवादी जनयुद्धले नै संघीय गणतन्त्र स्थापनामा मुख्य भूमिका खेलेको हो भन्नेमा केपी ओलीले सही गरेका छन् ।
त्यसो गर्दा हाम्रो भविष्य उज्ज्वल छ । तपाई युवा साथीहरूले केन्द्रीय कमिटीको प्रस्ताव हेर्नुहोला, सर्कुलर पठाइसकिएको छ । हेर्नुहोला । हामीले फेरि यो राष्ट्रको नेतृत्व लिनका लागि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, यो एउटा नेताले गरेर हुने होइन । हामी सबैले सामूहिक रूपमा र मुख्यतः तपाई युवाहरुले व्यापक रूपमा आफूलाई तयार गर्नुभयो भने हामीले जित्छौँ । हामी सबैलाई समेटेर यो राष्ट्रलाई महान् राष्ट्र बनाउनसक्छौं । एक्काइसौं शताब्दीमा अहिलेसम्म नभएको समाजवादको मोडल दिनुछ हामीलाई, विचारमा नयाँ मोडल दिनुछ, राजनीतिमा नयाँ मोडल दिनुछ, अर्थतन्त्रमा नयाँ मोडल दिनुछ , संस्कृतिमा नयाँ दिनुछ, नयाँ उत्पादन अभियान चलाउनुछ र छिटोभन्दा छिटो, राम्रोभन्दा राम्रो तरिकाले विकासको गति दिएर जनतालाई समृद्ध बनाउनु छ । यही हाम्रो सपना हो । तपाईहरुले यसलाई आत्मसात् गर्नुभयो भने , सङ्कल्प गर्नुभयो भने नजितिने केही कुरा छैन ।